I-Linux 5.1-rc3, njengohlobo lwangaphambili, konke okuqhelekileyo | Ubunlog
I-Linux 5.1-rc3, njengohlobo lwangaphambili, zonke ziqhelekile
Iqhubekile enye iveki nenye iveki kungekho nto yothusayo. Ukuphela koloyiko oluncinci uLinus Torvaldas alubuyisayo ngomhla wakhe, nangona kuyinyani ukuba yayingekuko ukusilela okunzulu, kwathatha ubuthongo bukayise weLinux. I-Linux 5.1-rc3 ikhutshwe izolo okanye, yintoni efanayo, uMgqatswa wesithathu woKhululwa wenguqulo 5.1 ye Linux kernel. Ukusuka kwinto esinokuyifunda kwifayile ye- Inqaku elinolwazi, Yonke into ihamba kakuhle phantsi kweseyile epheleleyo.
I-Linux 5.1-rc3 inkulu kuneqhelekileyo, kodwa iseyinto eqhelekileyo kuhlobo lweRC esele ikude nokuba sesikweni. Le yinto iLuxux engathandi ukuyibona, kodwa ayikhathazi nokuba iyazi ukuba iyakufikelela kubungakanani bayo obuqhelekileyo. Eyona nto ibaluleke kakhulu kukuba, ubukhulu becala, akukho nto iqhelekileyo yenzekileyo kule veki iphelileyo, ukuze sizive sinoxolo lwengqondo ngokufunda inqaku elikhankanyiweyo ngasentla.
I-Linux 5.1 iya kukhutshwa ngoMeyi
Ukuba kukho umntu oshiye ezibuza ukuba iLinux Kernel 5.1 izokwazi ukufikelela ku-Ubuntu 19.04, impendulo nguhayi. Ukuba akukho nto yenzekayo, ukumiliselwa kwayo ngokusemthethweni kuya kwenzeka nge-5 kaMeyi, ngelixa kukho into eyenzekayo, iya kufika ngoMeyi 12 Into ebaluleke kakhulu kuya kufuneka yenzeke ukuze ikhutshwe kamva. Ubuntu 19.04 iya kuthumela nge-kernel version 5.0.x I-Linux, endinokubheja kuyo kwi-v5.0.2 phantse. Okwangoku, olona hlobo luhlaziyiweyo luLinux Kernel 5.0.5 kwaye abo bafuna ukusebenzisa le nguqulo kufuneka bahlaziye ngesandla.
Ngokumalunga neendaba eziza neRC3, uTorvalds wakhankanya ukuba Olona tshintsho lukhulu kukususa umqhubi we-mt7621-eth, ukusukela ngoku ngumqhubi we-mediatek olawula ezi zixhobo.
ULinus ugqibezela ileta yakhe ukubuza abasebenzisi kunye nabaphuhlisi ukuba bavavanye ingxelo entsha. Iiyure ezingama-24 kusekutsha kakhulu ukuqinisekisa ukuba iLinux 5.1-rc3 ayinangxaki, kodwa siyathemba ukuba iyenzeka kwaye xa kusungulwa ngokusesikweni, ukusebenza kwayo kuya kufutshane kangangoko kunokwenzeka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ubuntu » I-Linux 5.1-rc3, njengohlobo lwangaphambili, zonke ziqhelekile
Cacisa i-cache ye-DNS ngokulula kwi-Ubuntu
I-Linux Lite 4.4, esekwe kwi-Ubuntu 18.04.2, ikhutshwe ngokusemthethweni